Ny tranga fitendry keyboard Logitech Combo Touch misy trackpad dia azo natokana ho an'ny iPad Pro 2021 | Vaovao IPhone
Logitech dia iray amin'ireo marika tadiavinay indrindra rehefa misy kojakoja ho an'ny Apple noho ny sandany lehibe amin'ny vola. Amin'ity tranga ity dia ny Tranga finday Trackpad an'ny Combo Logitech Combo, izay azo amidy ankehitriny ao amin'ireo maodely 12,9-inch naseho tamin'ny volana aprily lasa teo.
Ny fonony fitendry Logitech dia tsy isalasalana fa safidy iray handinihana rehefa mieritreritra ny hividy an'io karazana kojakoja io ho an'ny iPad vaovao isika ary io no mitahiry vola sy ny kalitaon'ny fitaovana ampiasaina amin'ireto karazana vokatra Logitech ireto tena safidy tena tsara izy ireo.
Tsy ilaina intsony ny milaza azy fa ity tranga Logitech Combo Touch vaovao ity dia mifaninana mivantana amin'ny Apple Keyboard Magic. Apple dia amidy amin'ny $ 349 ary ity tranga keyboard sy Trackpad vaovao ity dia misy vidiny atiny bebe kokoa $ 230.
Betsaka ary isan-karazany zoro mijery hametrahana ny iPad Pro, fanohanana ny Apple Pencil, fanalahidy backlit, fidirana haingana amin'ny sasany amin'ireo lakile ireo, Trackpad iray tena miasa ary ambonin'izany rehetra izany dia misy kalitaon'ny fitaovana tena mendrika iPad 12,9 mirefy sasany amin'ireo tombony azo avy amin'ity fonony fitendry ity. Mazava ho azy fa tsy manisa fa ny vidiny dia mora lavitra noho izay atolotry Apple antsika amin'ny fonony fitendry.
Ity fitaovana ity dia mifamatotra amin'ny lozisialy amin'ny alàlan'ny mpampitohy marani-tsaina amin'ny iPad Pro, ary azo ampifandraisina amin'ny tariby tsy misy lozika koa izy io ka tsy hanana tariby na zavatra toy izany isika. Ny hany maharatsy azy dia izao fitendry izao ihany azo alaina amina preorder any Etazonia ary izany tsy misy afa-tsy amin'ny volondavenona, ny ambiny dia tombony daholo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Ny tranga fitendry Logitech Combo Touch misy trackpad dia azo natokana ho an'ny iPad Pro 2021 vaovao
Miaraka amin'ny famoahana ny iOS 14.5.1 Apple hanasonia ny iOS 14.4.2